Football Khabar » ब्राजिलविरुद्ध मेस्सीलाई प्लेइङ–११ मा नखेलाउने !
ब्राजिलविरुद्ध मेस्सीलाई प्लेइङ–११ मा नखेलाउने !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली समयअनुसार भोलि (बुधबार) बिहान पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आयोजक ब्राजिल र पाहुना टोली अर्जेन्टिना खेल्दैछन् । सो खेलबाट फाइनल पुग्ने पहिलो टिमको टुंगो लाग्नेछ । प्रतियोगितामा सबैभन्दा बलिया मानिएका दुई टिम सेमिमै भिड्न लागेकाले यो खेल धेरैका लागि प्रतीक्षाको खेल बनेको छ ।
सो खेलका लागि बलियो तथा घरेलु टोलीविरुद्ध लिओनल मेस्सीको टिम अर्जेन्टिना दबाबमा हुनेछ । किनभने, ऊ यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट लयमा छैन । टोलीका कप्तान तथा प्रमुख फरवार्ड मेस्सी पनि खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । भोलि हुने महत्त्वपूर्ण खेलमा मेस्सीमाथि धेरैको नजर हुनेछ । किनभने, ब्राजिलविरुद्धको खेलमा उनका लागि आफ्नो खराब लयमा पूर्णविराम लगाएर आफ्नो स्तर देखाउने मौका हुनेछ ।
तर, अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक लिओनल स्कालेनीले भने ब्राजिलविरुद्ध कप्तान मेस्सी सुरुआती टोलीमा नपर्न सक्ने बताएका छन् । खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले अर्का फरवार्ड सर्जियो अगुएरो सुरुआती टोलीमा पर्ने बताउँदै गर्दा उनले मेस्सीबारे अन्योलपूर्ण भनाइ राखे । उनले मेस्सीबारे आफूले निर्णय लिन बाँकी रहेको बताउँदै ‘टिमका लागि जे सही हुन्छ त्यही निर्णय लिने’ बताए ।
‘यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि, सर्जियो अगुएरो भोलिको खेलमा सुरुआती टोलीमा पर्नेछन् । उनी सधैं शंकाको घेरामा हुने खेलाडी हुन् । तर, यतिबेला उनीमाथि मैले विश्वास गर्नुपर्छ,’ स्कालोनीले हाँस्दै भने, ‘बरु मेस्सी सुरुआती टोलीमा खेल्ने–नखेल्ने टुंगो छैन । टिमको हितलाई ध्यानमा राखेर म उनको बारेमा निर्णय लिनेछु ।’
जारी प्रतियोगितामा मेस्सीको लगातारको खराब प्रदर्शनका कारण स्कालोनीले ब्राजिलविरुद्ध मेस्सीलाई बेन्चमा राख्न सकिने पत्रकार सम्मेलनमै स्पष्ट रूपमा बताए । उनले भनेजस्तै मेस्सी सुरुआती टोलीमा नपरे ब्राजिलविरुद्ध युवा फरवार्ड पाउलो डिबालाले सुरुआती टोलीमा स्थान बनाउने पक्का छ । चार खेल सकिँदा डिबालाले हालसम्म मात्रै १७ मिनेट खेलेका छन् । तर, मेस्सीले चारवटै खेलमा पूरा समय मैदानमा बिताए पनि मात्रै १ गोल गरेका छन् । समूह चरणमा पेनाल्टीबाट गरेको उनको १ मात्रै गोल हो ।
प्रकाशित मिति १७ असार २०७६, मंगलवार ११:५८